युगसम्बाद साप्ताहिक - म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ?
Tuesday, 01.21.2020, 02:42pm (GMT+5.5) Home Contact
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ?
Wednesday, 05.17.2017, 12:06pm (GMT+5.5)
नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण सुरु हुँदै गर्दा युरोपेली मुलुक फ्रान्सले युवा राष्ट्रपति पायो । भर्खरै मात्र राजनीति दल गठन गरेका इम्म्यानुएल म्याक्रोनले त्यहाँ लामो समयदेखि स्थापित रहेका दलका प्रभावशाली र राजनीतिक अनुभव संगालेका नेतालाई पछारेर जनताको परिवर्तनको चाहना पूरा गरे । फ्रान्सको त्यो परिवर्तनले विश्व राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । जनताले परिवर्तन खोजेपछि पाका नेता र पुरानो पार्टी हैन नयाँ नीति र युवा खोज्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । जनताले परिवर्तन चाहेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित भयो ।
नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना भैरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भए पनि ती दलभित्र पनि युवा र क्षमतावानहरु जनताको रोजाईमा पर्ने आँकलन गरिएको छ तर सम्पूर्ण परिणाम नआइकन यसै भन्न सकिन्न । धेरैको चाहना परिवर्तन भए पनि परम्परागत राजनीतिक स्वरुपलाई छाडन सकिरहेका छैनन् । परम्परागत राजनीतिक शक्ति र तिनीहरुको परम्परागत दृष्टिकोण, नीति, योजना र कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ र त्यसका लागि युवा र सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने आम चर्चाको विषय भए पनि मतदाताले कसलाई छनोट गर्लान् भन्ने चासो, उत्सुकता र प्रश्न यथावत छ । मुलुकको यो पुस्ताका राजनीतिक दलका नेता क्रान्तिमा जति सफल भए उनीहरु मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा असफल भएकै कारण अब नयाँ नेतृत्वको खोजी हुन थालेको छ । जसरी फ्रान्समा म्याक्रोनले पार्टी गठन गरेको १३ महिनामा राजनीतिक हस्तीहरुलाई पराजित गरेर जनता अब नश्लवादी राजनीतिमा परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने देखाइदिए त्यस्तै क्षमता नेपाली जनताले देखाउलान कि नदेखाउलान वा त्यसको सुरुवात होला कि नहोला भन्ने कुतुहलता कायम छ ।
किनभने मुलुकको राजनीति सत्ताकेन्द्रित हुँदा अनेक समस्या र विकृति निम्तिएको छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई संस्थागत गरिएको छ । यसलाई हटाउन युवा र देशभक्त नेतृत्वको खाँचो छ र यसको सुरुवात स्थानीय तहबाट हुने धेरैको अपेक्षा छ । स्थानीय निकाय भनेको मुलुकको राजनीतिको मेरुदण्ड हो । विकासदेखि राजनीतिक स्थिरता र अवसरको ढोका यहीबाट खुल्छ । तर बुढाले ठाउँ नछोड्ने ठिटाहरू अधिकार खोस्न नसक्ने स्थिति विद्यमान नै छ । क्षमतावानहरु पनि नेताको दौराको फेर समातेर अवसरको खोजीमा लाग्ने हुँदा ठूलो समस्या र रिक्तता महसुस भैरहेको छ । किनभने राजनीतिक चेतना नै मानिसको पहिलो आधारभूत चेतना भएको मान्ने हो भने अबको समय स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत व्यक्त गर्ने, निर्भयपूर्वक सहभागिताको वातावरण सिर्जना गर्ने र जनता चाहनालाई वस्तुनिष्ठ ढंगले विना राजनीतिक पूर्वाग्रह सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो स्थिति छैन । युवाले अग्रसरता देखाउने र पाका नेताहरुले अभिभावकत्व गर्ने समय आइसकेको छ । अबको समय राजनीतिक दलका पाका नेताहरुले सत्ता र शक्तिको लोभ गर्ने हैन, आफ्नो राजनीतिक अनुभवलाई युवाहरुको जोश र ऊर्जामा हैंसे गर्न उपयोग गर्नुपर्छ । यसको सुरुवात स्थानीय तहबाटै गर्ने हो । समाजमा भिजेको, राम्रो छवी बनाएकाहरुले आफ्नो तहको विकासको स्पष्ट योजनासहित उम्मेदवारी दिएर नश्लवादी राजनीतिको अन्त्य गर्ने पहल गरे पनि यो एकै पटकमा हुँदैन । अहिले सुरुवात भने भएको छ ।
क्रान्तिपछिका शान्ति र शान्तिसंगैको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा नेपालको शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको कुरा उनीहरुले स्वीकार्नु पर्दछ । अब यसको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई दिन कञ्जुस्याई गर्नुहुँदैन । यसै भएर नेताहरुप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । जनताले अर्को विकल्प खोज्नु अघि नै नेताहरुले विकल्प दिए सबैको भलो हुने थियो । किनभने अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको यो एक दशकमा पटकपटक सत्ताको फन्को मारिरहेका नेताहरूको चरित्रमा अहिलेसम्म कुनै सुधार छैन । बारम्बार एउटै फलाको हालेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पूच्छर ढुंग्रामा हाले पनि बांगाको बांगै’ भनेझैं जतिपटक जनतासामु माफी मागे पनि नेताहरूको चरित्रमा कुनै सुधारको संकेत छैन । यतिबेला आम जनतामा पुराना नेताहरूको सोच, संस्कार र व्यवहार पुरानो भैसकेकाले अब उनीहरूले सन्यास लिएर युवा वर्गलाई नेतृत्व सुम्पने बेला आइसकेको बताइरहेका छन् । युवाहरू पनि अब हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने मान्यतामा जुर्मुराउने र अघि बढ्ने समय आइसकेको छ ।